Lugood waa barnaamij default u helaan iyo wareejinta music, sawiro iyo faylasha kale ee aaladaha Apple ah. Sidoo kale in qalabka kale ee Apple, iPod tiirsan Lugood ay file wareejinta iyo gurmad sida caadiga ah. In badan oo inaga mid ah ayaa ku koray caadaysteen in ay syncing iyo helitaanka faylasha boggayaga iPod dhex Lugood sanadihii la soo dhaafay tan iyo iPod hore suuqa soo galay sanado badan ka hor. Si kastaba ha ahaatee, Lugood ma ogola music iibsaday oo aan heeso iyo in lagu wareejiyo ka our iPod sababo la xidhiidha Apple ee arrinta-gudubka xuquuqda iyo awoodda ay u leeyihiin in ay curiyaan faa'iido ka music iyo heeso iibsaday ka Lugood.
Sidaas dambeyntii waxaan cufan iPods naga gabayo waxaan jeclaan iyo ka sii muhiimsan, lacag la'aan, na wajjahay dhibaatada sida loo ka iPod heli heesaha oo aan u iibsaday inay Lugood. Qaar badan oo idinka mid ah, aniga oo kale ah, ayaa la weydiiyay su'aasha soo socota, "Sidee in non songs iibsaday ka iPod in Lugood?"
Waa hagaag, waxaa jira labo xal for this question.with barnaamijka TunesGo our, hadda si fudud aad ku wareejin kartaa non music iibsaday iyo heeso ka iPod in Lugood.
Xalka 1. Gacanta wareejiyo music aan iibsaday ka iPod in Lugood
Xalka 2. Si fudud Bedelka music aan iibsaday ka iPod in Lugood leh TunesGo
Tani waa mid ka mid ah hababka kaa caawin kara in aad ka iPod wareejin music aan u iibsaday inay Lugood. Asal ahaan waxay u baahan tahay cable USB iPod ah, aad iyo iPod your computer shakhsi.
Tallaabada 1 xiriiriyaan iPod si aad u computer
Isticmaalka cable yimid aad iPod ah, xiriiriyaan iPod si aad u computer. Your iPod waa inay awoodaan si ay u muujiyaan ka yar 'My Computer' uu furmo, sida hoos ku qoran;
Tallaabada 2 Display files maqan
Under qalab, on sahamisa daaqadaha, dooran 'Tools ", ka dibna' Folder Options" ka dibna dooro 'aragtida' in wada hadal pop-up ah. Fiiri 'files Display qarsoon iyo fayl ee menu hoos-hoos.
Tallaabada 3 Copy files music ah
Marka aad gujisid si uu u furo iPod ka 'My Computer' window, waa in aad ku heli lahayd gal ah oo lagu magacaabo 'iPod _ Control' ahaan.
Marka aad folder furi by double u gujinaya, waxaad arki doontaa dhammaan faylasha music in iPod uu leeyahay. Tani waa gal ah in uu kaydiyaa oo dhan music in aad u hagaagsan in aad iPod. Waxa kale oo ay kuu ogolaaneysaa in aad nuqul ka dhan files iyada oo nuqul iyo Jinka hab fudud. Files music waxaa si kastaba ha ahaatee aan kala sooc lahayn badbaadiyey.
Tallaabada 4 dar files music si ay Lugood aad.
Burcad Lugood, on menu Lugood inay tagaan si ay Edit, markaas paste, taas dari doono oo dhan files music si ay Lugood aad.
Si aad u awood Lugood ah in ay kala files ee hab habsami leh, samee waxay soo socda;
Dooro "rabtid" oo aad ka heli kartaa oo ku saabsan Edit "menu.
rabtid Advanced "adigoo gujinaya" Advanced "laba doorasho u baahan in la hubiyaa inuu Aado" on Doorashadan,
dhig Lugood Media Folder abaabulay
files Copy in folder Lugood Media markii isagoo intaa ku daray in maktabadda.
• Waa lacag la'aan ah.
• Waxa aan u baahnayn baakadaha software dheeraad ah ama codsiyada.
• Way fududahay in la raaco markii aad leedahay faham asaasi ah oo IT ah ee khasaaraha : • Waxay ku tusaysaa music aan kala sooc lahayn halkan ka taas oo ay adag tahay in aad xulan kuwan raadkaygay saxda ah waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay. • Geedi socodka oo muujinaya aad files qarsoon waxaa laga yaabaa in lagu wareero oo haddii sida in ka tago laga yaabaa in qaar ka mid ah fayl nidaamka muhiim ah oo computer nugul. • Geedi socodka waa xaq aad u dheer qof oo innaba waxgarasho ma aasaasiga ah IT ah.
Iyadoo TunesGo, hadda waxaad si fudud u wareejin kartaa non music iibsaday iyo heeso ka iPod in Lugood in talaabooyin fudud oo kaliya dhowr
Tallaabada 1 Download iyo rakibi TunesGo
xiriiriyaan iPod si aad u computer
Isticmaalka cable yimid aad iPod ah, xiriiriyaan iPod si aad u computer. Burcad TunesGo by double waxaa gujinaya ka dib markii aad u rakibay si aad u computer. TunesGo awoodaan in ay si toos ah loo ogaado in aad iPod la content ee aad iPod aslanba abaabulay dhinaca bidix ee interface user waa in uu ahaado. Soor ee 'qalabka', si aad u heli karto files music aad non-iibsaday ka iPod.
Bedelka aan iibsaday music iyo heeso ka iPod in Lugood.
Marka aad faafin 'qalabka', oo dhan songs non iibsaday muuqan doonaa dhinaca midigta ee suuqa ugu weyn ee TunesGo. Dooro oo dhan files music aan iibsaday aad rabto in aad u wareegto Lugood ka iPod, kani waxaa samayn kara by haysta hoos u muhiim ah 'Ctrl' aad click on dhan files music aan iibsaday aad rabto in aad u wareegto Lugood halka. Dhinaca qaybta sare ee suuqa ugu weyn, guji "Dhoofinta si '' dhoofinta maktabadda Lugood 'button, oo aad kala iibsiga ka bilaabi doona, iyadoo ku xiran tirada kuwan raadkaygay aad wareejinta, habka si uusan qaadan waqti aad u badan.
Ka dib markii la dhoofiyo ayaa dhameystirtay, aad si guul leh ku wareejin doonaa non oo dhan music iibsaday ka iPod in Lugood aad. Markaas waxaad ku raaxaysan karaan dhagaysto iyaga on your computer ama waxa kale oo aad iyaga u hagaagsan kartaa in qalab kale oo aad ku raaxaysan dhagaysto iyaga on go ah. TunesGo bixisaa sida ugu fudud oo ugu fudud in ay la tacaalaan si ay hawlo adag oo ku saabsan qalabka Apple waa mid fudud oo si toos ah siyaabo weeraryahanka xitaa in wax ma yeeli doonto qalab aad. Waxaa sidoo kale laga heli karaa labada Windows PC iyo Mac
Muuqaalada dheeraad ah TunesGo
• aad kaamil ah Saaxiibkiis Lugood
Maamul, ogaado iyo wadaagno music la TunesGo, ee Lugood Saaxiibkiis fiican ee Android iyo macruufka.
• Saxiixa aad Music ka Device macruufka
Waxaad hadda ku wareejin kartaa music ka iPhone, iPad ama iPod dib Lugood aad. Haddii aad badiyay xogta computer ama la siiyey qalab muusikada preloaded, TunesGo ka qalab macruufka dhaqaaqo kartaa music dhabarka Lugood maktabadda on your computer galay.
• Isticmaal Lugood leh Android
Lugood iyo Android - wada ee la soo dhaafay! TunesGo jabo caqabadaha of Lugood iyo ogolaanaysaa Androiders isticmaali Lugood sida qalab macruufka ah. Nidaameed iyo qalab Android aad wareejiyo maktabadda Lugood aad si fudud TunesGo.
• YouTube sida Personal Music Source
fudud u sii qulquli xaalkiisa music online wareegaya suuqa kala standalone ka add-on mode.In hal talaabo, aad haatan soo bixi kartaa ama record music ka YouTube iyo goobaha kale music si toos ah maktabadda Lugood aad galay. Mid ka mid ah qaababka TunesGo nesest, waa ablitity in ay isku mar daro tahay album iyo tags music aad downloads iyo cajalado.
• Nadiifi aad Dhan Music Library
TunesGo si toos ah tafaasiil iyo ilaa nadiifiyaa maktabadda music aad ka mid ah. Waxa kale oo aad gacanta DEAD kartaa music, bedesho album cover tahay, tirtirto tus, ama meesha laga saaro raad maqan. ururinta music iconYour hadda si qurux badan soo abaabulay.
> Resource > Lugood > Sidee si ay u gudbiyaan Non iibsaday Music ka iPod in Lugood